IiNdawo zoLondolozo lweNtengiso-Funda ukuRhweba
tag: Uqikelelo lwamaxabiso
I-Bitcoin Cash (uhlalutyo lwamaxabiso e-BCH: i-BCH Risks eqhubekayo yokuhla ukuya kwi-250 yeedola ukuba ilahlekelwa yiNkxaso ye-280 yeedola
I-altcoin idibanisa phakathi kwe- $ 280 kunye ne-300 yeedola
I-Bitcoin Cash iya kufikelela kwi-258 ephantsi xa uxinzelelo lokuthengisa luqhubeka
Ixabiso langoku: $281.57
Intengo yeNtengiso: $ 5,191,316,193
Umthamo wokuThengisa: $ 1,354,663,829
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Disemba 8, 2020
I-Bitcoin Cash isezantsi emva kokujongana nokwaliwa kwinqanaba lama- $ 320 kunye ne-300. Ngaphandle koko, idityanisiwe kuluhlu oluqinileyo phakathi kwe- $ 280 kunye ne- $ 300. Ukophuka okanye ukuqhekeka kunokwenzeka ukuba kwenzeke ukuba i-crypto iqhubeke ngokudityaniswa okwangoku. Umzekelo, ixabiso liyawa, kwaye ikhefu elingaphantsi kwe- $ 280 yenkxaso iya kunyanzela i-BCH ukuba iwe. Nangona kunjalo, ukuhamba ecaleni kuya kuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso ibambe. Okwangoku, i-BCH ithengisa nge- $ 281 ngexesha lokubhalwa.
Ingqekembe ingaphantsi kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Kubonakala ngathi i-crypto isondela kwindawo ethe kratya kwintengiso. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kwee-SMAs ezibonisa ukuhla okuya ezantsi kwemali leyo.
Ixabiso libonisa umqondiso we-bearish wengqekembe. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuhamba ezantsi kwengqekembe. NgoDisemba i-1 yehla; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH inokuthi iwele kwaye ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo. Ixabiso eliphantsi le- $ 257.51.
tags BCH, BCH / USD, I-Bitcoin Cash, Uqikelelo lwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- iBitcoin iphinda ibuyele kwi-8800 yeedola, ngaba iiNkunzi zeBull zinokuLunqoba olu Hlaselo lubalulekileyo?
Ukuhlaziywa: 27 January 2020
• I-Bitcoin ibuyise umva nge-8% kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo
Emva kokunyuka kwi- $ 8800, i-Bitcoin ilinde indlela elandelayo
I-Bitcoin ibonakalise ukungazinzi okukhulu kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Ngeli xesha, inyukele ecaleni kweenkunzi zeenkomo kulandela ukubola okubukhali ukusuka kwi- $ 8300. Emva kokuwela i-8500 yeedola izolo, i-BTC iqhubele phambili yaya kuthi ga ngoku ijikeleza i-8800 yeedola. Okwangoku, imarike isalinde ikhefu okanye ibuyiselwe kwakhona. Nokuba yeyiphi kwezi ntshukumo iya kumisela umqondiso olandelayo weBitcoin.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9000, $ 9150
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 8600, $ 8535
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-2H-Bullish
I-Bitcoin igqibile i-XABCD ipatheni yeharmonic kumgca obomvu we-8800 yeedola kwitshathi yeeyure ezi-2. Njengoko sibona, i-BTC ifumanisa kunzima ukwaphula eli nqanaba lokumelana. Nangona kunjalo, ipateni ye-bat inokuvelisa ukubuyiswa okuncinci kweBitcoin ukuba ukwaliwa kuyenzeka.
I-BTCUSD, i-2H Itshathi-nge-27 kaJanuwari
Inqanaba lokubuyisela endaweni emayijongiwe lilayini eluhlaza okwesibhakabhaka eyi- $ 8535, nangona abathengisi banokuhlangabezana nenkxaso kufutshane ne- $ 8600. I-Bitcoin isabonisa amandla okwangoku. Ukuba ikhefu le- $ 8800, i-Bitcoin inokuphinda ibuye i-9000 kunye ne-9150 yeedola, ukumelana nendawo etyheli. Ukuza kuthi ga ngoku, i-cryptocurrency ekhokelayo iphantsi kwe-radar ye-bullish.
I-Bitcoin iqikelelwa kuluhlu oluphezulu ngenzuzo enkulu ngaphezulu kweeyure ezingama-24 zokuthengisa. Ukuphakama okuphezulu kunye nokunyuka kwamaxabiso asezantsi kufakwa kwisitishi. I-BTC iphantse ukuvavanya umda wesiteshi kunye nexesha elifanayo ibonisa umqondiso wobuthathaka kwitshathi yemizuzu engama-30.
Ukuhamba kwe-bearish kunokuba kuqhubeka. Ixabiso linokuhla kwinkxaso yesitayile ejikeleze i-8700 yeedola.
I-BTCUSD, i-30M Itshathi-nge-27 kaJanuwari
Ukuba amaxabiso ayaphula le nkxaso, i-BTC inokuthi yehle kancinci kwindawo yokuqala yenkxaso eluhlaza okwesibhakabhaka eyi- $ 8645 ngaphambi kokuba iqhubeke iye kuma- $ 8535 kukuchukumisa kwesibini. I-Bitcoin inokujika kancinci ukuba le mimandla isilele ukucinezela uxinzelelo lokuthengisa. Okwangoku, i-Bitcoin ithengisa ngokuxhathisa okubalulekileyo. Ukuba oku kunganyangeki kuyaphuka, kuzuze lukhulu kwiBitcoin nge- $ 8900, $ 9000 nangaphaya.
Thengisa: $ 8802
I-TP: $ 8650
SL: $ 8866
tags BTC, BTCUSD, Itshathi, Uqikelelo lwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) -i-ETH iphinda ibuye kwi-140 yeedola kodwa iDowntrend ihlala iVumelekile.
Ukuhlaziywa: 16 Disemba 2019
U-Ethereum, owesibini ngobukhulu kwi-cryptocurrency ngentengo yentengiso, uqhubekile nokubonisa uphawu lobuthathaka kwezi ntsuku zidlulileyo kulandela ukubuyiswa kukaNovemba 25 ukusuka kwi- $ 133 ukuya kwi- $ 159 ngoDisemba 4. Ngokuchasene neBitcoin, i-Ethereum ilandela lo mkhuba. Nangona kunjalo, intshukumo yokuqhubela phambili inokudlala ngokukhawuleza xa iinkunzi zeenkomo zibuyele emarikeni.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Itshathi ye-4H-Bearish
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 143, $ 146, $ 159
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 140, $ 138, $ 133
U-Ethereum ulandela imeko yexesha elincinci ye-bearish kwisakhelo seyure ezi-4. Ukujonga kwintengiso, ixabiso le-ETH linokwehla ngaphezulu ukuba ixabiso litshipha ngaphantsi kwe- $ 140 yenkxaso ebibambe okwethutyana ngoku. Eyona nto kugxilwe kuyo kwiibhere zii-138 zeedola kunye ne-133 yeedola- esezantsi kuNovemba.
ETHUSD, 4H Itshathi-nge-16 kaDisemba
Ukongeza kokuhla okunokubakho, i-ETH ngoku ithengisa kancinci ngaphantsi kwamanqanaba e-MACD ukubonisa ukuba abathengisi basekhona. Ngakumbi, i-RSI okwangoku ibonisa imeko ebuthathaka kwisalathiso seyure ye-4.
Ukuba i-MACD kunye ne-RSI inokubuyela kwindawo elungileyo, ixabiso le-ETH linokunyuka liye kuthi ga kwi-143 kunye ne-146 yeedola, ukuhlangabezana nomda wesiteshi ongaphezulu. Ukunyuka okuthe kratya abathengi banokubona i-159 yeedola kwakhona. Kodwa njengoko ime ngoku, ezi veki zintathu zisezantsi zisasebenza kwimarike. Olona tshintsho kuphela kwindlela yangoku kukuba ukubuyela umva kuqhubekile.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Itshathi yeYure-Bearish
U-Ethereum uphinde wahlawula i-140 yeedola emva kokuzama okwesithathu ukwahlukana. Oku kwakukhokelwa yimpendulo encinci yokuthenga eyavumela i-ETH ukuba ngoku ithengise nge- $ 141. Ukwahlulwa kwexabiso kutshanje akonelanga ukuqinisekisa imeko yokunyusa. Ngapha koko, ipateni enonxantathu ebonwe kwitshathi yeyure ibonisa ukuthengisa okungenayo kunye nenkxaso kwi $ 138 nakwi- $ 136.
I-ETHUSD, Itshathi yeYure-Disemba 16
Okwangoku, imeko ephezulu ayithandabuzeki kuba akukho phawu lwentshukumo elungileyo ngalo mzuzu. Nangona kunjalo, kukho uluhlu lokuthenga olusondeleyo kwi- $ 143. I-RSI yobuchwephesha iphakamisa imeko esezantsi. Ngokufanayo, i-MACD okwangoku ikummandla ongalunganga. Oku kuphakamisa ukuba i-Ethereum ihlala iphantsi kolawulo olomeleleyo lwe-bearish okwangoku njengoko amaxabiso amaninzi enokuhla.
I-ETHEREUM YOKUTHENGISA UMqondiso
Thenga ukungena: $ 143.5
I-TP: $ 140.3
tags uhlalutyo, Uqikelelo lwamaxabiso, Trading
Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso- iithagethi ze- XRP ze- $ 0.214 Ukulandela ukuQhawulwa koMtshato
Ukuhlaziywa: 10 Disemba 2019
Ukusukela kwimiqondiso yethu yangaphambili yokurhweba nge-crypto, ixabiso leRipple XRP liyaqhubeka nokujikeleza kwi-0.23 yeedola ngenxa yemali ephantsi yexabiso kwimarike. Ukunyuka kwexabiso leentsuku ezi-4 kwakuphikisana noxinzelelo lokuthengisa olusebenzayo ngoku. I-XRP inokuphinda iqhubeke nentshukumo elungileyo ukuba intengiso inokufumana kufutshane nenkxaso. Ngaphandle koko, ixabiso linokubuyela umva nge-4 kaDisemba iphantsi okanye iphantsi.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 0.231, $ 0.25, $ 0.30
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 0.21, $ 0.20, $ 0.18
Iinyanga ezintandathu zeentshukumo ze-bearish zihlala zibalulekile kwitshathi yemihla ngemihla. Ukuphela kwexesha likaNovemba akukabikho semthethweni wokunyukela phezulu de kube iinkunzi zeenkomo zinokoyisa ukumelana ne- $ 0.23; eziphinde zaba sisoyikiso kubathengi izolo. Ngoku, ixabiso leXRP liye lahla kancinci lafika kwi-0.222 yeedola. Ixabiso linokubuyela kwi- $ 0.21 kunye ne- $ 0.20 yenkxaso ukuba unikezelo luyanda. Inokuba mandundu ukuba ukuthengisa kufikelela kwi- $ 0.18.
I-XRPUSD, itshathi yemihla ngemihla-nge-10 kaDisemba
Ukujonga i-RSI, siyabona ukuba inkunzi yeXRP iyaqhubeka ukubuyisa amandla kodwa ukwehla kwexabiso kutshanje kuguqule i-RSI yaphantsi. Imarike inokunyuka inyuke iye kwi-0.231 yokuxhathisa ukuba inqanaba elingaphezulu liyakwazi ukubamba. Ukuhlanganiswa okuqinileyo okuqinisekileyo kunokuvumela ukuqhubekeka ukuthenga kwi $ 0.25 kunye ne-0.30 yeedola. Nangona kunjalo, imakethi ye-Ripple XRP iseyi-bearish kwisalathiso seMACD.
U-Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso: Itshathi yeYure-Ukuthwala
Izolo, intengo yeXRP ibrownown ukusuka kwiintsuku ezintlanu ezikhulayo kwaye njengoko sibona, imakethi ithengisa kufutshane ne-0.22 yeedola yendawo yenkxaso- apho kukho inkxaso emhlophe ethe tye. Singalindela ukuba imakethi igqithele kwindawo yesibini yenkxaso kwi- $ 0.214 ukuba abathengisi baphinde bahlangana kakuhle.
I-XRPUSD, itshathi yeyure-nge-10 kaDisemba
Ukuba i-XRP ye-Ripple ifumana inkxaso kwiindawo ezingama-0.22 zeedola, imakethi inokubuyela kwi-0.225 ye- $ kunye ne- $ 0.23 yokumelana. Ukunyuka okuthe kratya ngaphezulu kokumelana ne- $ 0.233 kunokuvumela ukuthengwa okunzulu ukuya kwi- $ 0.24 nangaphezulu. Kodwa ujonge ukuseta okwangoku kwe-bearish, i-XRP inokulungisa ilahleko ibe yi- $ 0.214 kungekudala. Ukwehla kweeyure ezingama-24 zokugqibela kukhokelele kwizalathi zobuchwephesha kwindawo ye-bearish. Oku kubonisa ukuba abathengisi bafumana ulawulo lwentengiso.
XRP YOKUTHENGISA UMqondiso
Thengisa ungeniso: $ 0.222
I-TP: $ 0.214
tags Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical, I-XRPBTC
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -I-Bitcoin ilindelwe ukuba yiBullish kodwa ukungazinzi kuhlala kusezantsi
Ukuhlaziywa: 3 Disemba 2019
Ukusukela ukuvulwa okufutshane kwenyanga, iBitcoin ibithembele kwinkxaso ye- $ 7200 kodwa yehlulekile ukubuyela umva ngenxa yoxinzelelo oluphantsi kwintengiso. Ukuqhuba phantsi kwenkxaso ekhankanywe apha ngasentla kunokukhokelela kubuthathaka kwixabiso. Nangona kunjalo, ulawulo lwe-BTC okwangoku lonyuswe nge-0.1%. Sinokubona i-rally ene-bullish ukuba ipesenti iyaqhubeka nokunyuka.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi yemihla ngemihla-Ukuthwala
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7445, $ 7844
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 7210, $ 7051
Nangona kunjalo, ixabiso likaBitcoin likwazile ukubuyisa umda wesitishi esezantsi kwi-6600 yeedola kwiveki ephelileyo yorhwebo. Ngaphandle koko, i-bearish bias yonyaka ophakathi ihlala iphambili. Okwangoku iBitcoin ikukuhla kweentsuku ezine ngexabiso lokurhweba langoku kwi- $ 7387. Okwangoku, inkxaso ephambili ikufutshane ne- $ 7200 kunye ne- $ 7000- inqanaba elibalulekileyo leBitcoin.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-nge-3 kaDisemba
Ukufumana amandla ngaphezulu kwe-7445 yeedola luphawu lokuqhubeka kokuqhubela phambili njengoko i-7844 yeedola inokuphononongwa. Okwangoku, i-9000 yeedola ihlala iyinto ephambili ekujolise kuyo ukuba i-BTC iqhubeka nokuhlonipha ijelo elihlayo. I-MACD yemihla ngemihla yeBitcoin isekhona kakhulu kwindawo ye-bearish kodwa inokunyuka emva ibone ukunyuka okufanelekileyo. Kwangokunjalo, ixabiso likhangela ukubuyela kwi-RSI 30 njengokuphinda kwenzeke.
Ukurhabaxa kokurhweba kuphantsi kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Ukurhweba kweBitcoin kungaphantsi kweedola ezingama-7500 zemimandla ukusukela oko kuvulwa ngeveki, nangona kukho ukunganyangeki okuncinci kwimarike kwi-7445 yeedola enokuthi ichonge uxinzelelo lokuthenga olunokubakho ukuba uxhathiso luyaphuka.
Ngaphaya koko, imarike inokuthi ijongane nelayini enamachaphaza amthubi ehambelana nomgangatho ophakamileyo weveki yeedola ezingama-7500 ngaphambi kokuba siqinisekise ngokufudukela kwi- $ 7800.
Okwangoku, i-RSI ibonisa amandla ngokuseta kokuthenga kodwa inokuhlangabezana nokuchasana kwinqanaba lokuthenga ngaphezulu. Kwelinye icala, kujongwa kwi-MACD ngeyure, kwabonakala ngathi abathengi batshintsha kancinci ukuya kwizenzo zexabiso. Nangona kunjalo, i-BTC ibambe inkxaso kwi-7210 yeedola. Kwakhona, inkxaso engama- $ 7051 inokudlala ukuba ixabiso liyaqhubekeka.
Thengisa ungeniso: $ 7378
I-TP: $ 7210
tags BTC, Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) -Umzabalazo we-ETH ungaphantsi kweedola ezili-160 njengeeBearish Bias zihlala ziBalaseleyo
U-Ethereum ubone ilahleko enkulu emalunga ne -6% kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo zokurhweba, esenza umqondiso wokurhweba nge- $ 148 ngalo mzuzu. Okwangoku, imarike isekhona kakhulu kwiinyanga ezintandathu ezantsi kuluhlu. I-ETH inokuthi ihlale i-bearish unyaka wonke ukuba abathengi bayasilela ukubonisa ukuzibophelela okuqinileyo kurhwebo. Ukuza kuthi ga ngoku, i-cryptocurrency yesibini ngobukhulu yehle nge -0.15% ngentengo yentengiso ye- $ 16.1 yezigidigidi.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 158, $ 177
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 138, $ 131
Imbonakalo yemihla ngemihla ye-Ethereum ibonisa amandla e-bearish avela ngokungapheliyo ngalo mzuzu. Ukulandela ukuthengiswa kweveki ephelileyo, i-ETH ikwazile ukubuyisa kancinci emva kokufumana inkxaso kufutshane nomda wejelo osezantsi kwi-132 yeedola. Ukuba abathengi banokuqhubeka nokusebenza kule nkxaso, ixabiso le-ETH linokuphinda lifumane i-158 yeedola kunye ne-177 yeedola. Kodwa njengoko ime ngoku, intengiso iphantsi kolungiso oluncinci lwe-bearish.
ETHUSD, Itshathi yemihla ngemihla-Disemba 3
Ngaphambi kokuba siqwalasele ukunyuka okuya phezulu, uEther kufuneka aphume kwisitishi esihlayo. Ukujonga kwiintsuku ezimbalwa zokugqibela zehla, i-ETH inokuphinda ibuye kwakhona kufutshane nenkxaso kwi-138 yeedola kwaye inokuba yi- $ 131. Njengoko kubonisiwe kwizalathi zobuchwephesha, i-MACD isekwimeko ye-bearish. Nangona kunjalo, i-RSI iphinde yafumana imeko engaphezulu kodwa ihleli kwicala elisezantsi. Singalindela ukunyuka kwamaxabiso kwakamsinya nje ukuba abathengi babuyele emarikeni.
U-Ethereum uqhubekile nokubonisa uphawu lobuthathaka kwitshathi yeyure njengoko imarike ngoku yenza ishaneli esihlayo esiye saqala ukubakho ukusukela nge-28 kaNovemba. Abathengisi bafumana ulawulo lwentengiso. Okwangoku, i-ETH ivavanya umda wesiteshi ongaphezulu ngokuseta okungaphezulu. Inkxaso ephambili yokubukela yi- $ 146 kunye ne- $ 143. Inokuba nzima ukuba kwenzeka ukophuka komjelo.
I-ETHUSD, Itshathi yeYure-Disemba 3
Nangona kunjalo, ukuba u-Ethereun uphume ngokucacileyo kumda ongaphezulu wejelo, iinkunzi zeenkomo ziya kubuyisa i-152 kunye ne-156 yeedola ukuxhathisa ngaphakathi kokuqhwanyaza kweliso ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nentshukumo elandelayo. Ukujongwa kwi-RSI kucebisa ukuba intengiso ye-ETH iphantsi koxinzelelo lwe-bearish. Nangona kunjalo, isalathiso seMACD sele siza kushiya indawo engathandekiyo. Singalindela ukuqhekeka ukuba i-MACD yenza i-crossover ecacileyo ye-bullish.
Thenga ukungena: $ 148.5
I-TP: $ 156.2
tags ETH, Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC )- $ 7.4k ukwaliwa kugcina ukubuyela umva kubambe- Ngaba iBitcoin ayinazigqibo?
I-Bitcoin ixhase ngenkxaso kwi-7000 yeedola okwangoku kodwa inokuba buthathaka ukuba umdlalo we-bearish wenzeka kwakhona. Ngelixa uhlala kwiinyanga ezintandathu ezisezantsi zeedola ezingama-6600, i-BTC inokuguqula ukuba ipateni yesitishi kwitshathi yemihla ngemihla iyaqhubeka nokubamba amanyathelo ngexabiso. Okwangoku, uxhathiso lwe- $ 7400 lusabambe uxinzelelo lokuthenga njengoko iqela elomeleleyo le-bullish linokuseta i-rally efanelekileyo kwi-9000 yeedola. Nangona kunjalo, uvakalelo lwe-bearish luhlala lusebenza kwimbono yexesha elide.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7400, $ 8000, $ 8800
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 7000, $ 6800, $ 6600
Itshathi yemihla ngemihla yeBitcoin iqhubekile nokugcina ukubekwa kwe-bearish kwezi nyanga zidlulileyo. Ijelo elehlayo linikezele ngenkxaso ye-BTC kumda osezantsi. Emva kokubhabha ukusuka kwi-6600 yeedola kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, i-swing ye-bullish yamiswa kwi-7400 yeedola- inqanaba elibalulekileyo lokuguqula. Ukunyuka okuphumelelayo kuya kusizisa ngqo kwi- $ 8000, ilandelwe yi- $ 8800.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Novemba 27
Ukuthengisa okuqhubekekayo kwixesha elifutshane kunokuqiniswa kuseto lwentengiso. Ukuba i-Bitcoin ihamba ngokobuchwephesha bobuchwephesha, imarike isenokuphinda iphinde ibuyise i-7000 yeedola kunye ne-6800 yeedola kwakhona ngaphambi kokwenza uguquko olupheleleyo. Ngaphandle koko, iinyanga ezintandathu ezisezantsi zinokuphinda ziqwalaselwe.
Ixesha le-15 lemizuzu ye-Bitcoin ibonisa ukuba ixabiso lihla kumda wesiteshi emva kokunyuka ngaphezulu kwe- $ 7000 ngo-Novemba 25. Siyabona ukuba i-BTC okwangoku idibanisa malunga ne- $ 7100 okwethutyana ngoku. Ukuhamba ezantsi kungaphantsi kwe-Bitcoin kwi-7000 yeedola yenkxaso.
Ngakolunye uhlangothi, ukunyuka okuphezulu kunokuvumela ukuthenga ukuxhathisa kwesiteshi kwi- $ 7200. Okwangoku, i-RSI ngoku ivavanya inqanaba lokuthengisa ngaphezulu. Ukuhamba okuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba kuthengise ukuba inqanaba lokugqitha liqinisa. Kodwa i-MACD iwele kancinci ukubuyela kokubi kunokubangela ukwehla okungaphezulu ukuba iyaqhubeka nokuwa.
Thengisa ungeniso: $ 7122
I-TP: $ 7051
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -iBitcoin ibuyisa umva ngaphezulu kwe- $ 7000, ngaba oku kunokuba sisilungiso?
Ukuhlaziywa: 25 Novemba 2019
Sikhankanye isaphulelo esinokubakho seBitcoin kwangoko namhlanje, ethe ekugqibeleni yadlalela phezulu. Ukubuyiselwa kwakhona kwakukhawuleza nge- $ 600 ngokudibanisa neeyure ezi-8 zokugqibela zokuthengisa. Xa kuthelekiswa ne-10% yelahleko kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, iBitcoin ngoku ibone ukulungiswa kwe-8% inzuzo, ukubuyisela imarike ngaphezulu kwe- $ 7000. I-BTC okwangoku inexabiso kwi-7200 yeedola emva kokulahla kancinci ukusuka phezulu kubusuku be- $ 7346. Nangona kunjalo, imarike inokuprinta ukuphakama kwansuku zonke xa ixabiso lingadlula ukuxhathisa kwe- $ 7400.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7400, $ 7600
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 7000, $ 6800
Ngaphezulu kweeyure ezimbalwa ezidlulileyo, iBitcoin ikwazile ukubuyela kwi-6600 yeedola- iphantsi mihla le kwintengiso. Ukuphindaphinda kubangele ukunyuka kwexabiso elifanelekileyo ukuya kwi-7346 yeedola, apho i-BTC ngoku ibambe khona uxhathiso. Okwangoku, ikhefu elingaphezulu koxhathiso olutyheli lwediagonal ($ 7000) yintshukumo yexesha elifutshane ekhawulezileyo esele imisiwe kukumelana okumhlophe okuthe tye kwi- $ 7400.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-Novemba 25
Ukuba abathengi banokudlula kwi-7400 yeedola, iBitcoin inokuthi ibethe i-8000 yeedola ngaphandle kwexesha kodwa i-7600 yeedola yeyona nto ikufutshane kakhulu ekufuneka uyijongile. Kwelinye icala, i-BTC inokubuyela umva kwi- $ 7000 kunye nenkxaso enokubakho ye- $ 6800 yokuxhasa ukunyusa amandla. Nangona kunjalo, i-RSI itshintshele kwindawo ekhuthazayo ukuveza inzuzo yakutshanje kwintengiso. I-MACD ngoku ijonge phezulu kodwa okwangoku ayiyi kwi-crossover. Uxinzelelo olunamandla lokuthenga lunokulindelwa ukuba iyure nge-MACD ivelisa umqondiso wokuwela onamandla.
Isenzo sexabiso samva nje senza ukuba iBitcoin ilandele imvakalelo ekhulayo kwithuba lemizuzu eli-15 emva kokunyuka ngaphezulu komgca oxhathisayo otyheli kwaye ikakhulu ukubuyela umva ngaphezulu kwe- $ 7000. Ayisiyiyo loo nto, i-Bitcoin iphantse yachukumisa i-7400 yeedola kusuku ngaphambi kokuba iwele apho i-BTC inexabiso ngoku nge-7242 yeedola. Ukwehla okungaphezulu kunokutsala imarike ibuyele kwi-7100 yeedola yenkxaso, ilandelwe yi- $ 7000 kunye ne- $ 6900.
Ukujonga izikhombisi zobuchwephesha, siyabona ukuba amandla okonyusa amandla ayancipha kwi-MACD-ukwehla okunokubangela ukubuyela ngokukhawuleza kwimarike. Kwelinye icala, i-RSI iye yehla kancinci kwimimandla ethengiweyo ngenxa yokwaliwa kutsha nje nge- $ 7346. Ukuba i-BTC inokuqhuba ngempumelelo ukumelana ne- $ 7400, i-7500 yeedola kunye ne-7600 yeedola kukuchasana okulandelayo ekufuneka ujonge kuko.
Thenga ukungena: $ 7252
I-TP: $ 7400 / $ 7500
tags BTC, Uhlalutyo lwamaxabiso, Uqikelelo lwamaxabiso